4 Conditions that Can Increase Blood Glucose Level in Diabetics – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” မမြှျောလငျ့ဘဲ ဆီးခြိုတကျစသေော အခွအေနေ(၄)ခု “
ဘယျလိုအခြိနျမှာ ဆီးခြို(သှေးတှငျးသကွားဓာတျ) တကျစနေိုငျလဲ?
ဆီးခြိုတကျစမေယျ့အစားအစာတှစေားတဲ့အခါ၊ ဆီးခြိုဆေးတှေ သခြောမသောကျသုံးတဲ့အခါမှာ ဆီးခြိုတကျတတျတယျဆိုတာကတော့ အားလုံးသိပွီးသားပါ။
သို့သျော ဒီနှဈခကျြအပွငျ မမြှျောလငျ့ဘဲ ဆီးခြိုတကျစတေတျတဲ့ အခွအေနတှေလေညျးရှိတတျတာမို့ သတိထားနိုငျစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အအေးမိ၊တုပျကှေး စသဖွငျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဖြားနာနတေဲ့အခါမြိုးမှာ အစားလညျးထိနျး၊ဆေးလညျးသောကျပါလကျြနဲ့ ဆီးခြိုတကျနနေိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုဝဒေနာရှငျတဈယောကျ ဖြားနာနပွေီဆိုပါက အဖြားရောဂါပွငျးထနျမှုပျေါမူတညျပွီး ဆီးခြိုကိုပုံမှနျစဈနကေအြကွိမျရထေကျ ၃ကွိမျမှ၎ကွိမျအထိ အခေါကျရတေိုးစဈဆေးဖို့လိုအပျနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုဝဒေရှငျတဈဦး ဖြားနာနပွေီဆိုပါက မိမိဘာသာကွိတျကုခွငျး၊ စပျဆေးမြားဝယျသောကျခွငျးက အလှနျအန်တရာယျမြားတာကွောငျ့ ဆရာဝနျနဲ့သာ စနဈတကသြှားရောကျပွသသငျ့ပါတယျ။
အရှယျရောကျပွီးလူတဈယောကျဟာ တဈနလြေှ့ငျ အနညျးဆုံးအိပျခြိနျ ၈ နာရီရှိရပါမယျ။ ဒါ့ထကျလြော့နညျးပွီး အိပျမယျ၊ အိပျရေးမဝတာ၊အိပျရေးပကျြတယတှမြေားလာပွီဆိုရငျ ဒါဝါ ကိုယျခန်ဓာအတှကျ ဖိစီးမှုတဈခုဖွဈလာပွီး ဆီးခြိုတကျစနေိုငျပါတယျ။
ပနျးနာရငျကပျြရောဂါတှငျအသုံးပွုသော စတီးရှိုကျပါဝငျသညျ့ဆေးမြား၊ဆီးဆေးအခြို့၊သှေးတှငျးအဆီကဆြေးမြား..စတဲ့ဆေးမြားကွောငျ့ သှေးတှငျးသကွားတကျမွငျ့တကျစပွေီး ဆီးခြိုတကျစပေါတယျ။
စပျဆေးတှမှော စတီးရှိုကျတှေ အထညျ့မြားတာကွောငျ့ စပျဆေးဆိုတာ ဆီးခြိုသမားမြားဝေးဝေးရှောငျရမယျ့ထဲမှာ ထိပျဆုံးကပါပါတယျ။(စပျဆေးတှဝော အလှနျအန်တရာယျမြားတာကွောငျ့ သာမနျလူတှလေညျး မသောကျသုံးသငျ့ပါဘူး။)
ဆေးလိပျဆိုတာ ဘယျသူ့အတှကျမှကောငျးကြိုးမပေးသလို ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ ပိုလို့တောငျမှ ဆိုးပါသေးတယျ။ဆေးလိပျကွောငျ့ ဆီးခြိုမွငျ့တကျထိနျးရခကျစသေလို နှလုံးသှေးကွောပိတျခွငျး၊လဖွေတျခွငျး၊ကြောကျကပျပကျြစီးခွငျး စတဲ့ ဆီးချြုရဲ့မောကျတကျတှဲအန်တရာယျတှဖွေဈနှုနျးကိုပါ မွငျ့တကျစပေါသတဲ့။
ဒီအခကျြလေးတှကေို ဖတျပွီးရငျတော့ အရငျက ထငျထားသလို ဆီးခြိုဆိုတာ အစားထိနျး၊ဆေးသောကျရုံနဲ့မပွီးဘဲ အခွားအရေးတကွီးဂရုပွုစရာလေးတှပေါရှိတယျဆိုတာ သတိခပျြနိုငျပွီပေါ့။
” မမျှော်လင့်ဘဲ ဆီးချိုတက်စေသော အခြေအနေ(၄)ခု “
ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဆီးချို(သွေးတွင်းသကြားဓာတ်) တက်စေနိုင်လဲ?
ဆီးချိုတက်စေမယ့်အစားအစာတွေစားတဲ့အခါ၊ ဆီးချိုဆေးတွေ သေချာမသောက်သုံးတဲ့အခါမှာ ဆီးချိုတက်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ။
သို့သော် ဒီနှစ်ချက်အပြင် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆီးချိုတက်စေတတ်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်းရှိတတ်တာမို့ သတိထားနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အအေးမိ၊တုပ်ကွေး စသဖြင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖျားနာနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အစားလည်းထိန်း၊ဆေးလည်းသောက်ပါလျက်နဲ့ ဆီးချိုတက်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တစ်ယောက် ဖျားနာနေပြီဆိုပါက အဖျားရောဂါပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ဆီးချိုကိုပုံမှန်စစ်နေကျအကြိမ်ရေထက် ၃ကြိမ်မှ၎ကြိမ်အထိ အခေါက်ရေတိုးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆီးချိုဝေဒရှင်တစ်ဦး ဖျားနာနေပြီဆိုပါက မိမိဘာသာကြိတ်ကုခြင်း၊ စပ်ဆေးများဝယ်သောက်ခြင်းက အလွန်အန္တရာယ်များတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့သာ စနစ်တကျသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးလူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံးအိပ်ချိန် ၈ နာရီရှိရပါမယ်။ ဒါ့ထက်လျော့နည်းပြီး အိပ်မယ်၊ အိပ်ရေးမဝတာ၊အိပ်ရေးပျက်တယတွေများလာပြီဆိုရင် ဒါဝါ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဆီးချိုတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတွင်အသုံးပြုသော စတီးရွိုက်ပါဝင်သည့်ဆေးများ၊ဆီးဆေးအချို့၊သွေးတွင်းအဆီကျဆေးများ..စတဲ့ဆေးများကြောင့် သွေးတွင်းသကြားတက်မြင့်တက်စေပြီး ဆီးချိုတက်စေပါတယ်။
စပ်ဆေးတွေမှာ စတီးရွိုက်တွေ အထည့်များတာကြောင့် စပ်ဆေးဆိုတာ ဆီးချိုသမားများဝေးဝေးရှောင်ရမယ့်ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။(စပ်ဆေးတွေဝာ အလွန်အန္တရာယ်များတာကြောင့် သာမန်လူတွေလည်း မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။)
ဆေးလိပ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့အတွက်မှကောင်းကျိုးမပေးသလို ဆီးချိုသမားတွေအတွက် ပိုလို့တောင်မှ ဆိုးပါသေးတယ်။ဆေးလိပ်ကြောင့် ဆီးချိုမြင့်တက်ထိန်းရခက်စေသလို နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း စတဲ့ ဆီးခ်ျုရဲ့မောက်တက်တွဲအန္တရာယ်တွေဖြစ်နှုန်းကိုပါ မြင့်တက်စေပါသတဲ့။
ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ အရင်က ထင်ထားသလို ဆီးချိုဆိုတာ အစားထိန်း၊ဆေးသောက်ရုံနဲ့မပြီးဘဲ အခြားအရေးတကြီးဂရုပြုစရာလေးတွေပါရှိတယ်ဆိုတာ သတိချပ်နိုင်ပြီပေါ့။